Sudan: Madaxweyne Albashiir oo si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sudan: Madaxweyne Albashiir oo si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo
A warsame 27 April 2015 27 April 2015
Mareeg.com: Madaxweynaha dalka Sudan, Cumar Albashiir ayaa markale ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha dalkaas, kadib markii uu helay 94% codadkii laga dhiibtay doorashadii dhawaan dhacday, sida uu ku dhawaaqay Guddiga doorashada.
Mukhtaar Al-asam oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada caasimadda ah ee Al-khartoum ayaa ku dhawaaqay in madaxweyne Albashiir helay ilaa 5 Mliyan oo cod, iyadoo dadka codeeyey ahaayeen 5 Milyan iyo bar.
Markii lagu dhawaaqay natiijda doorashada iyo guusha Albashiir ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey Takbiir.
Al-asam ayaa sheegay in dadka codeeyey ayaa gaarayeen 46% dadka reer Sudan kuwooda codeynta loo ogolyahay oo gaaraya 13 Milyan.
Albashiir ayaa la tartamay 15 Musharrax oo caan aheyn, kuwaasoo gooni gooni u taagnaa, waxaana tartanka doorashada iney ka qeybgalaan diiday Axsaabta Mucaaridka ah.
Ninka ugu roon dadka la tartamay Albashiir oo lagu magacaabo Fadli Alsayid Shuceyb oo ah gudoomiyaha Xisbiga Al-xaqiiqa ayaa helay 1.43% codadka la bixiyey.
Madaxweyne Albashiir wuxuu xukunka Sudan afgembi ku qabsaday sanadkii 1989-kii, iyadoo ay taageerayeen Kooxaha Islaamiyiinta ah.
Sanadkii 2010 ayaa markale dib loo doortay, waxaana doorashadaas sida tan sanadkaan qaadacay Mucaaridka oo sheegay ineysan ku dhaceyn hanaan cadaalad ah.
Kalfadhiga 6-aad ee baarlamanka Soomaaliya oo si rasmi ah loo furay (Saworro)
Gaas & wakiilka UNSOM oo qalbi dejin ugu tegay shaqaalaha UNICEF ee Garowe